Chinyorwa chemahara systemd kugovera | Kubva kuLinux
Isaac | | Kugoverwa, Featured, GNU / Linux
SysV Init yakatsiviwa ne systemd de facto mune mazhinji aripo ekuparadzira GNU / Linux. Pakati pekuchinja ikoko, mamwe ma distros akatosarudza akagadziridzwa masisitimu akadai seUpstart yakavakirwa pane init daemon, yaive muUbuntu, ChromeOS, openSUSE, Debian, Red Hat, Fedora, nezvimwe.
Iyo nyowani systemd yakanyanya kuomarara kupfuura masisitimu ekare, chimwe chinhu chisina kukodzera zvakanyanya neiyo Unix uzivi hwekushandisa zvirongwa zvakapusa. Kunze kwaizvozvo, chokwadi chekuti inochengetedza zvinyorwa mumabhinari hazvina kufarirwa nevakawanda futi. Nekudaro, izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti zvaita kuti mamwe mabasa ave nyore uye kuti zvakare ine zvayakanakira. Kunyange zvakadaro, zvichiri kutsamwisa vashandisi vazhinji ndiani achiri kuda iyo yakasarudzika system ...
Kune ese avo vanoda kutiza systemd uye vanonamira neyekare, iwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda ma distros ayo achiri akasununguka kune ino imwe system. Uye haisi Devuan chete (musiyano weDebian isina systemd yakave inozivikanwa kwazvo).
Pano ini ndinokuratidza inonakidza runyorwa rwema-systemd-emahara kugovera:
Devuan: iri Debian isina systemd, ichienda "nhanho imwe kumashure" mupfungwa iyi kubvisa vashandisi veiyi nyowani system. Muchokwadi, zita rayo rinobva mukubatanidzwa kweshoko rekuti Debian + VUA (Veteran UNIX Admins).
Alpine Linux: ndechimwe chekugovera pasina systemd iwe chaunogona kuwana. Iyo yakavakirwa pa musl uye BusyBox, kuve wakareruka zvikuru uye wakachengeteka.
Artixlinux- Izvi zvinobatana nezvakasiyana zviripo zvakagoverwa zvichibva paArch Linux. Kugovaniswa kwakaringana kumhanya nekukurumidza uye pasina systemd.
kushama: ndeimwe yeasingawanzo kugoverwa. Haisi forogo yeiyo iripo, asi inogadzirwa kubva pakutanga, iine yayo package package uye inoshandisa SysV init. Iyi sarudzo ine simba, asi inogona kunge isiri iyo yakanakisa kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakareruka uye usati uine ruzivo. Kunyangwe kana iwe uchida kuyedza chimwe chakasiyana, iri sarudzo hombe.
Slackware: yechinyakare yeiyo "yekare" linuxers. Kumwe kwekuparadzirwa kwakakurumbira uye kwakaomarara, pamwe chete naGentoo naArch Asi asi seizvi, inoshanduka-shanduka, ine simba uye yakanaka kwazvo kune avo vashandisi avo vafambira mberi Mune ino kesi inoshandisa isinganzwisisike script system, haisi iyo SysV init, asi iri BSD-maitiro senge ayo anoshandiswa nemamwe ma * BSDs.
Gentoo y Funtoo: imwe yeiyo distros yakanangana nevashandisi vane ruzivo nekuda kwekuoma kwayo, asi zvakaenzana zvinoshamisa. Iyi distro inozviparadzanisa pachayo kubva kune systemd kushandisa VhuraRC.
GUIX: kumwe kwekugovera kunobvisa systemd, mune ino GNU Daemon Sherped inoshandiswa se init system. Haisi nyore distro yekushandisa, uye inoshandisa transactional package management system.
antiX Linux: imwe yemahara systemd kugoverwa, uye yakavakirwa paDebian.
CRUX: ndeimwe distro inoenderana neBSD-dhizaini zvinyorwa uye yakajeka.
PCLinuxOS: Kana iwe uchida iyo Mandrake distro, saka iwe unofanirwa kuyedza iyi forogo iyo ichiri inochengeta iyo SysV init.
Adélie Linux: chirongwa chidiki chakanangana nechinangwa chekuremekedza mbiru nhatu dzakakosha pahunogara: kuve POSIX inoenderana, kuwanda kwemapurani, uye inochinjika.
Obarun: imwezve yakavakirwa paArch, nezvose izvi zvinoreva, pamwe nekutarisa pakujeka uye kureruka. Mune ino kesi, inoshandisa isinganzwisisike system inonzi 6s pachinzvimbo che systemd.
KISS Linux: zita rayo rinotopa zano rekuti chii, kureva kuti, rinoteera musimboti KISS. Icho chirongwa chakazvimirira, chakagadzirwa kubva kunobva, neBusyBox uye yayo yekutanga system.
LIGURES- Iyo haigone kutariswa seimwe yeanowanzo distros chero, asi yakasununguka kubva ku systemd. Iyo yakavakirwa paGentoo uye inoshandisa maviri sarudzo seinotsiva systemd: openRC kana s6.
Kana usiri nyanzvi kwazvo muLinux nyika kana usingade zvinonetsa, ini pachezvangu ndinokurudzira izvozvo unofarira kugara naDevuan… Kana iwe uri mushandisi wepamberi kana uchida kuyedza dzimwe nzira, wakasununguka kusarudza chero imwe yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Chinyorwa chemahara systemd kugoverwa
Ini ndinofunga inofanirwawo kuwedzerwa kuMXLinux nekuti nekumisikidza haishande nesystemd, kunyange ichiuya ichiiswa kuitira kuti mumwe munhu atange nayo, asi chinofanirwa kuitwa kubva kumberi sarudzo dzeGrub uye kuchichinja nemaoko nemushandisi.
Ini pachangu ndinoshandisa Artix neOpenRC, ndine bhutsu katatu neArch (Ini handina kuibvisa izvozvi uye zvinondibatsira kuenzanisa) uye Windows 10 yemitambo.
Ini ndinoshandisa OpenRC nekuti inoita kunge yakura zvakanyanya, nyore kushandisa uye zvinoita kwandiri kunge ndine ramangwana rakawanda sezvo zvichiratidza kuti imwe BSD inozoishandisawo.
Chinhu cheNice nezve kuva neArtix neArch pane imwecheteyo laptop ndeyekuti iwe unogona kuenzanisa mashandiro, nguva dzebhutsu, nezvimwe. Chandinogona kutaura ndechekuti Artix inopa Arch kukanda kukuru mune zvese kunze kwekudzima kwemakomputa kuri kukurumidza muArch.Zvino zvese zvese zvinoshanda zvirinani, kunyangwe Plasma inotanga nekukurumidza zvakanyanya kubva pachiratidziro chekupinda kusvika iyo yekukurumidza yaonekwa. tafura. Ndine zvakafanana mune zvese asi kana ndikaona kuti neyakagadziridzwa yega yega systemd Arch inowedzera, kunyanya nguva dzebhutsu dzakakwira kubva pagore kusvika pachikamu ichi. Ichokwadi kuti zvigamba zveIntel (Meltdown, Specter, nezvimwewo) zvinokanganisa asi zvaizokanganisawo Artix uye mutsauko pakati peumwe neumwe wakakura.
Ongororo yakanaka kwazvo uye nekutenda nekuenzanisa uku.
… Kunze kwezvo, wedzera "Knoppix" kune runyorwa rwekugovera pasina Systemd. Yakakwana kwazvo distro kana paine chero.
@ unodetantos ndatenda ...
ndeupi musiyano uripo pakati peumwe neumwe uye ndeupi wakanaka uye mune zvipi zvinhu zviri nani. Security?
Iwo akafanana chaizvo mune zvese kunze kweinit. Ivo vane iwo mapakeji akafanana, muchokwadi Arch's repos (kunze kwepakati) ari muArtix asi mumaonero angu ivo vakaita sekuchengetedzwa kwemazororo avo. Ini ndinonzwisisa kuti vanoronga munguva yepakati (kana nguva uye zviwanikwa zvichitendera) kuve nehutongi hwakazara hwezororo uye nekudaro vasina maArch ari mukugadzirisa. Ini ndinofungidzira kuti izvi zvikaitika kana vakatsvedza kutsamira pane systemd (aya maonero ehukama) sezvo ivo vakabvisa zvachose chero zororo rehurongwa, haungawane shim kana libsystemd-dummy kana chero chakafanana.
Kana zviri zvekuchengeteka, nekuti zvakafanana neArch, zvinoenderana nekuti unochengetedza sei, uchave unayo, kunyangwe nekusava nehurongwa, zvine chokwadi chekuti vanochengeta einiti dzakasiyana vanotora nyaya yekuchengetedzeka zvakanyanya kupfuura vanhu veesystem uye saka ndinozvitora sezvakanaka. kugara pasi kuti ichi chega chakachengeteka.
Nenzira, iwe unogona zvakare kuisa AUR mapakeji pasina matambudziko, ini ndaisa mashoma uye zero matambudziko.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti iyo init system iri S6, kwete 6S. Panyaya yeArtix, inopa matatu mavhezheni ane inits akasiyana: openrc, S3 uye runit.
SEGA inoda kudzoreredza yayo Arcade michina pakati pe "iwe-mhute"